R/wasaaraha Yahuudda oo socdaalkiisi Imaaraatka Carabta ku sifeeyay mid taariikhi ah.
Tuesday December 14, 2021 - 11:18:00
Ra'iisul wasaaraha maamulka Yahuudda ninka lagu magacaabo Naftali Bennett ayaa socdalkiisii ugu horreeyay ku gaaray magaalada Abu Dubai ee caasimadda dalka Imaaraadka carabta k dib soo celinta xiriirkii labada dhinac.
Madaxtooyada maamulka Sahyuuniyadda ayaa daabacday in Naftali safar taariikhi ah uu ku tagay magaalada Abuu Dubia waxayna ujeedka socdaalkiisa ku sheegtay xoojinta cilaaqaadka u dhaxeeya Tal’abib ee Abuu Dubia isagoo islamarkiiba kulamo la qaatay dhaxal sugaha Imaaraadka carabta Bin Zaayidka ku caan baxay Yahuud jacaylka.
"Waa dhacdo taariikhi ah Ra'iisul Wasaaraha ayaa Abu Dhabi ku tagay booqashadii ugu horreysay ee rasmi ah" Waxaa sidaas lagu yiri war kooban oo kasoo baxay xafiiska Bennett.
Wasiirkan Yahuudiga ah waxaa madaarka caalamiga ah ee Abuu Dubia ku qaabilay wasiirka arrimaha debadda dowladda dabadhilifka Imaaradka carabta camiilka lagu magacaabo Cabdalla Bin Zaayid.
Ka hor ziyaarada waftigan wuxuu Naftali Bennett ujeedka boqashadiisa ku sheegay adkaynta xiriirka maamulkiisa kala dhaxeeya hoggaamiyaasha imaaraadka carabta iyo waxa uu ugu yeeray (Nabad diiran) oo dhex marta labada shacab.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa aheyd maamulkii ugu horreeyay ee Carab ah oo iclaamiyo in uu lasaaxiibay Yahuudda isagoona liiska waxa loogu yeero Argagaxisada ku biiriyay kooxaha muqaawamada Falasdiin.